MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYGA PORCELAINE - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyga Porcelaine
Watson the Porcelaine markuu jiray 6 bilood
Magaca Porcelaine waxaa loola jeedaa jaakadiisa dhalaalaya, taas oo ka dhigaysa inay u ekaato taallo balaastikada. Intii lagu guda jiray xilliyadeedii wanaagsanayd ee 1700-meeyadii, Porcelaine-ka ayaa si weyn uga weynaa nooca casriga ah ee maanta. Waa eey aad u eg oo muuqaalkiisu aad u sarreeyo oo madaxana si fiican loo jarjarayo, sanka madow oo leh sanka ballaaran ee furan, iyo wejiga fidsan. Indhihiisu waa mugdi muuji macaan. Dheguhu waa khafiif yihiin, macangagsan yihiin oo fiiqan yihiin. Qoorta ayaa dheer oo caato ah, dabaduna waa mid culus xaga sagxadda laakiin cidhiidhi ayuu ku noqonayaa meel dhamaadka ah. Maqaarku waa inuu noqdaa mid casaan ah oo leh dhaqdhaqaaq madow oo aan badnayn oo ka muuqda jaakadda cad. Meel fog waxay ka bixinaysaa aragti ah muraayad buluug cirro leh. Koodhka cad ee adag wuxuu ka kooban yahay timo aad u wanaagsan oo dherer mucjiso ah oo gaaban. Midabka waxaa hakad gelin kara dhibco liin dhanaan ah oo jirka ku dhaca laakiin gaar ahaan dhagaha oo caan ah, cabbir badan.
Porcelaine waa ugaarsi firfircoon oo ba'an, laakiin jilicsan guriga dhexdiisa oo sahlan in la maareeyo. Way ku fiican tahay eeyaha kale iyo carruurta. Hun saaxiibtinimadani waa mid xoog badan oo aan daal lahayn oo leh dareen ur wanaagsan iyo cod muusig ah. Waa hound loo isticmaalo ugaarsiga baakadaha loogu talagalay dhammaan noocyada ugaadha duurjoogta ah. Sababtoo ah eeyadan ayaa si wada jir ah u ugaarsada iyagoon amar ka helin milkiilahooda, waxay isu beddeleen eeyo aad u madax bannaan oo geesiyaal ah oo aad u bulsheed Tani waa mid ka mid ah eeyaha ugaarsiga yar ee Faransiiska ee ka adkaaday xadka dhulkiisa hooyo isla markaana kiciyay xiisaha dibadda. Marka la eego nashaadaadka iyo jimicsiga ku habboon, tani waa wehel ku habboon guriga. Iyadoo aan lahayn jimicsi maskaxeed iyo / ama jireed eyga wuxuu noqon karaa mid sarreeya oo / ama mashquuliya. Haddii ay dareento milkiilayaasheeda inaysan ahayn sida maskax adag sida nafteeda, waxay noqon doontaa a xoogaa kas ah sida ay aaminsan tahay inay u baahan tahay inay ahaato hogaamiyaha xiriirka . Waxay ku qaylin doontaa buuqyada laga shakiyo, laakiin ma ahan ilaaliye. Dareenka ugaarsiga ayaa hore u soo baxa. Ey yaryar, xitaa markay siddeed toddobaad jirsadaan, waxay badanaa muujiyaan dabeecad tilmaamaysa. Ku habboon bini'aadamka ilaa isgaarsiinta canine waa lagama maarmaan.
Dhererka: Ragga 22 - 23 inji (56 - 58½ cm) Dumarka 21 - 22 inji (53½ - 56 cm)
Miisaanka: 55 - 62 rodol (25 - 27.9 kg)
Porcelaine laguma talinayo nolosha guriga.
Noocani wuxuu ubaahan yahay jimicsi badan, oo ay kujiraan maalinle, dherer, kacsan socod ama orod. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaaminta, sida dareenku u sheego eeyga hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasna wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha.
Qiyaastii 12-13 sano
Koodhka dhalaalaya ee dhalaalaya ayaa fududahay in la daryeelo.
Waxaa la rumeysan yahay inuu yahay kan ugu da'da weyn faransiiska, Porcelaine waxaa sidoo kale loo yaqaan Chien de Franche-Comté, ka dib markii uu horay u ahaa gobol Faransiis ah xadka Switzerland. Ka dib Kacaankii Faransiiska (1789-1799), tusaalooyinkii loo yaqaan 'Porcelaine' ayaa laga helay xadka Franco-Switzerland, taasoo keentay jahwareer ku saabsan inuu ka soo jeedo Faransiiska ama Switzerland. Si kastaba ha noqotee, jilitaanka waxaa loo aqoonsan yahay Faransiis, waxaana loo maleynayaa inuu ka soo jeedo Ingiriis Harrier, the hadda-dabar go'ay Montaimboeuf , iyo sidoo kale qaar yar oo Laufhunds ah oo Switzerland ah. Nooca ayaa lagu duubay Faransiiska illaa 1845 iyo Switzerland tan iyo 1880, markii xirmooyinka ugaarsiga ugu horreeyay la aasaasay. Hal dhibic ka dib Kacaankii Faransiiska, jinsi ahaan dhabtii waa la waayey laakiin waa 'dib loo dhisay' oo hadda waxay ku taagan tahay dhul adag. Badeecada loo yaqaan 'Porcelaine' waxaa inta badan loo adeegsadaa ugaarsiga bakaylaha iyo deerada caarada ee xirmooyinka waxaana laga helaa inta badan Faransiiska. Laguma yaqaan meel ka baxsan Faransiiska, Switzerland iyo Talyaaniga. Waxay sidoo kale ugaarsadaan ugaarsiga duurjoogta (waqooyiga).
Owen the Porcelaine, waxaa iska leh sawirka T.L.C. Qafisyada
shaybaarka madow stern bernard
waa maxay eey moxie
cas Irish iyo dabeecad dhigayo hormuudka cad
pitbull iyo bulldog eyyo isku qasan
stern bernard newfoundland weynta pyrenees mix
St bernard shay mix puppy puppy